स्थानीय तह अर्थात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको विवरण अब मोबाइल एप्समा
काठमाडौं : तपाई हामीमध्ये धेरैलाई थाह नहुन सक्छ, नयाँ नेपालको नयाँ सिमांकन के हो ? सात वटा प्रदेशहरुको सिमांकन कसरी भएको छ ? अनि तपाईको प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तह अर्थात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका कति छन् ? त्यस्तै कुल जनसंख्या कति छ अनि कति वटा वडा छन् ?
तर अब तपाईले यी सबै जानकारी आफ्नै हातमा पाउन सक्नुहुनेछ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बिहीबार यी सबै जानकारी समेटिएको मन्त्रालयको मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको छ । साथै मन्त्रालयले स्थानीय तहको वेबसाइट तथा स्थानीय तहको अनलाइन नक्साहरु प्नि सार्वजनिक गरेको छ ।
अब तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर लोकल गभर्नेन्स एप्स डाउनलोड गरेर सजिलै इन्टरएक्टिभ म्याप प्रयोग गरी आफ्नो प्रदेशको मात्रै होइन, सातै वटा प्रदेशको जीआईएस म्याप हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारको वेबसाइट र उनीहरुको गतिविधि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।
मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा यो एप्स तथा वेबसाइट निर्माण गरेको हो । यसले स्थानीय तहमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज त बनाएको साथै वित्तिय व्यवस्थापनमा यसले ठूलो राहत पुर्याएको स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलिया बताउँछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तह संचालनको क्रममा थुप्रै झमेलाहरु देखा परेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई मोबाईल सेट खरीद गर्ने विषयको त निकै आलोचना समेत भयो । यस्तोमा मन्त्रालयको यो पहलले स्थानीय निकायलाई बिना खर्च आफ्नो छुट्टै वेबसाईट उपलब्ध गराएको छ भने बेबसाइटको संचालन र त्यसका लागि आवश्यक तालिमका लागि पनि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय निकायलाई छ लाख र एक जना प्राविधिक समेत उपलब्ध गराएको छ ।
मन्त्रालयको यो कार्यले सर्वसाधारणलाई स्थानीय तहको बारेमा सहज सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय तहलाई सूचनामैत्री पनि बनाउने प्रयास गरेको छ । साथै प्रविधिको प्रयोगले स्थानीय तहलाई सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा पनि राखिएको छ ।